विहीबार जन्मने व्यक्तिको स्वभाव, भाग्य र वैवाहिक जीवन कस्तो हुन्छ ? - विहीबार जन्मने व्यक्तिको स्वभाव, भाग्य र वैवाहिक जीवन कस्तो हुन्छ ? -
विहीबार जन्मने व्यक्तिको स्वभाव, भाग्य र वैवाहिक जीवन कस्तो हुन्छ ?
उज्यालो प्रतिनिधि ९ मंसिर २०७८, बिहीबार शिक्षा
काठमाडौँ । ज्योतिष शास्त्रमा जन्मबार अनुसार पनि मानिसको भाग्यमा असर गर्ने बताइन्छ । जन्म समय अनुसार नै मानिसको भूत, वर्तमान र भविष्यका बारेमा फलादेश गरिन्छ । आज ज्योतिष शास्त्र अनुसार विहीबार जन्मेका मान्छेको भाग्य कस्तो हुन्छ ? भन्ने विषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ-
पृथ्वीको नजिकैबाट तुफानी गतिमा जानेछ क्षुद्रग्रह : नासा